September 17, 2019 - Myitter
September 17, 2019 Myitter 0
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့လို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ စွမ်းဆောင်နိုင်သော မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် နှစ်ထပ်ကွမ်းချန်ပီယံကြီး အောင်လအန်ဆိုင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ထိုးသတ်ရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက် မစောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပါပြီတဲ့နော် အာရှ ရဲ့ အကြီးမားဆုံး နဲ့ အခမ်းနားဆုံး ဖိုက်တာ ပြိုင်ပွဲကြီး ဖြစ်တဲ့ One Century ပွဲစဉ်ကို လာမယ့် အောက်တိုဘာလ […]
ကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ် မန္တလေးက လူငယ် Tuesday, September 17, 2019 မန္တလေးမြို့မှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်လူငယ်တစ်ဦးက ၎င်းရရှိမည့်အမွေများထဲမှ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၉၅ဝဝ ကို ပြင်ဦးလွင်ရှိဖားအောက်တောရသို့ လှူဒါန်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် ကျောက်ဖျာ […]
ကိုယ်​​တွေ့မို့ မျှ​ဝေပါရ​စေ လွန်​ခဲ့တဲ့ ၄ လ​လောက်​ထဲကလမ်း​တောင်​မ​လျှောက်​နိူင်​​အောင်​ နာ​နေတဲ့ ဒူးကျီး​ပေါင်းတက်​တာအထူးကုနဲ့ပြ​/​ဆေးမျိုးစုံ​သောက်​/စက်​​တွေနဲ့​လေ့ကျင့်​ခန်းလုပ်​ မ​ပျောက်​လို့စိတ်​ညစ်​​နေတာသူငယ်​ချင်းတစ်​​ယောက်​နဲ့​တွေ့ပြီးသူ့ကိုယ်​​တွေ့ဆိုပြီးညွန်းလို့ မယုံ​ပေမဲ့စမ်းကြည့်​လိုက်​တာ တပတ်​အတွင်းလုံးဝနီးပါး​ပျောက်​သ​လောက်​ဖြစ်​သွားလို့ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေပါတယ်​ မူရင်းတင်​သူက သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦးပါ ကိုယ်​​တွေ့မို့ စမ်းကြည့်​​စေချင်​တယ်​​ သူငယ်​ချင်း ကို​ဇော်​ဦး Post ​သေချာလို့ကြေငြာပါရစေ၂၀၀၅ကစလို့ဒူးနာခဲ့တာ၂၀၀၈မှာဒူးထဲမှာချောတဲ့လမ်းကြောင်းသိပ်မရှိတော့ဘူးလမ်းတောင်သိပ်မလျောက်ပါနဲ့လို့profက​ပြောတယ်​ ၆/ ၈ / ၂၀၁၈ ရက်နေ့ကမတွေ့တာနှစ်​ပေါင်း၄၀ကျော်ကြာပြီဖြစ်​တဲ့သူငယ်ချင်းသင်္ချာပါမောက္ခကိုဝင်းဆွေ(အငြိမ်းစား)ပေးတဲ့ဆေးနည်း၆/၈/၁၈နေ့မှာဘဲစလိမ်းတာကနေ့၇၅%လောက်ကောင်းနေပါပြီ […]
မန္တလေး ကျောက်စိမ်းစေတီမှ ကျောက်အချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားအချို့ယူငင်မှုဖြစ်ပွား
မန္တလေး ၊ စက်တင်ဘာ , ၁၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီးမှ ကျောက်စိမ်းဖြတ်စအချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားများက ယူငင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး ဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး အရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ ကိုးလုံးပုတီးနေရာတွင် သံဆန်ခါကာရံထားရှိသည့် အဆင့်နိမ့် ကျောက်စိမ်းအချို့ကို ယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယူနေစဉ်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဂေါပကအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်ဦးက ပြောကြားသည်။ […]
မနေ့က ကျောက်ကျသွားလို့ သုံးခဲ့တဲ့ ဆေးလေးတွေ မျှဝေပါတယ်
မနေ့က ကျောက်ကျသွားလို့ သုံးခဲ့တဲ့ ဆေးလေးတွေ မျှဝေပါတယ် မနေ့ညက ကျောက်ကျသွားတာ ဝမ်းသာလိုိ့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်သောက်နေတဲ့ ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ 1. Fame ကထုတ်တဲ့ ဆီးကျောက်ပျော်ဆေး ၁ရက် ၄လုံး 2. Cital ဆိုတဲ့ဆေးရည်ကိုက ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း […]
ဘုရားမပြီးသေးသဖြင့် ခေတ္တစံပါယ်နေသော ပိတောက်တိုင်မှ ပန်းတွေအခိုင်လိုက်ပွင့်နေသော ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်း
ဘုရားမပြီးသေးသဖြင့် ခေတ္တစံပါယ်နေသော ပိတောက်တိုင်မှ ပန်းတွေအခိုင်လိုက်ပွင့်နေသော ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်း သာသာယာယာ မင်္ဂလာရှိကြပါစေ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် ကျောက်ချွိန်ရွာ ဝယ် ဘုရားစေတီဘေးမှာ ချိတ်ဆွဲမည့် ခေါင်းလောင်းကြီးအား စေတီမပြီးသေး၍ ဘုရားကြီးကျောင်းဆောင်ထဲတွင် ခေတ္တချိတ်ဆွဲလျက် စိုက်ထူထားသော ပိတောက်ငုတ်ကြီးများမှ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တော်သလင်းလပြည့်နေ့ဝယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း အုပ်ဆိုင်းလျက် ဝေဝေဆာဆာ ပိတောက်ပန်းများ […]
မန္တလေး ကျောက်စိမ်းစေတီမှ ကျောက်အချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားအချို့ယူငင် မန္တလေး ၊ စက်တင်ဘာ , ၁၇ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီးမှ ကျောက်စိမ်းဖြတ်စအချို့ကို တရုတ်ခရီးသွားများက ယူငင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဝေရောစနကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး ဂေါပကအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။ ကျောက်စိမ်းစေတီတော်ကြီး အရှေ့ဘက်မုခ်ရှိ ကိုးလုံးပုတီးနေရာတွင် သံဆန်ခါကာရံထားရှိသည့် အဆင့်နိမ့် ကျောက်စိမ်းအချို့ကို ယူသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး […]
ဒီလိုဆရာမမျိုး လိုချင်တယ်… ကြံခင်း..စက်တင်​ဘာ(၁၂)မဟာဘောဂလမ်း(ရဲစခန်းဝန်း)ရှေ့ပလက်ဖောင်းပေါ်ကမြင်ကွင်းလေး၊အမှိုက်ခြင်းအမှိုက်ပုံပေါင်းစုံကရှာဖွေကောက်ယူလာဟန်ရှိသောဘူးခွံပုလင်းခွံများကို ပီနန်အိတ်ဖြင့်ထမ်းလျက် ၁၂နှစ်ခန့်အရွယ်ကလေးငယ်တဦး… သူ့ရှေ့ မှာတော့ ဖြူစိမ်းဝတ်စုံဖြင့်ပညာရေးဌာနမှဆရာမကြီးတဦးကရပ်လျက်… ဆိုင်ကယ်က်ိုရပ်ဘေးနားအပြေးကပ်… စပ်စပ်စုစုကျွန်တော်… *ခလေးကကျောင်းမနေဘူးလား? *သုံးတန်းထိနေဘူးပါတယ် *ဘယ်မှာနေလဲ..ဘာလို့ကျောင်း ဆက်မတက်တာလဲ? *ရွှေတောင်စုဧရာနိုင်မှာနေတယ်ညီမလေးကကျောင်းတက်တယ် ကျွန်တော်အဖွားကိုပိုက်ဆံပေးဖို့ ပုလင်းခွံဘူးခွံတွေလိုက်ကောက်ရတယ်… *မင်းအဖေက? *အဖေမရှိတော့ဘူး..သေပြီ… *မင်းအမေကော? * သေပြီ.. *မင်းညီမလေးက ဘယ်ကျောင်းမှာတက်လဲ? ရွှေတောင်စုကျောင်းမှာနှစ်တန်း […]
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာမိသားစု နှစ်စု ထီပထမဆု ပြိုင်တူပေါက် September 17,2019 ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင် မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ (၂၀၁၉) ရက်နေ့ မှာ ထွက်ခဲ့တဲ့ ပထမဆု ဘတ်ငွေ (၆) သန်းဆု 340388(၃၄၀၃၈၈) နံပါတ် ကို တနေရာထဲ […]
ကျမလေ ညကတစ်ညလုံးအဖိုးရဲ့ အကြောင်းစဉ်းစားရင်းအိပ်မပျော်တာနဲ့ ဒီမနက် အဖိုးရှိရာကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျမလေ ညကတစ်ညလုံးအဖိုးရဲ့ အကြောင်းစဉ်းစားရင်းအိပ်မပျော်တာနဲ့ ဒီမနက် အဖိုးရှိရာကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဟိုရောက်တော့အဖိုးက ကျူးကျော်တဲလေးမှာတစ်ယောက်တည်းနေရတာပါ။ ကျမကို ချက်ချင်းမှတ်မိပါတယ်။ ကျမကိုမြင်ပြီးတော့ အိမ်ထဲကအပြေးထွက်လာတာမြေးလေးက တကယ်လာတာလားဆိုပြီးဝမ်းသာအားရ လာကြိုပါတယ်။ ကျမ မေးမြန်းကြည့်ရသလောက်အဖိုးနေထိုင်တဲ့ ၈ပေသာသာအိမ်လေးကို (မသမာတဲ့လူတစ်စုက)အကြိမ်ကြိမ်ဖျက်စီးပစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်တဲ့အခုထိဆိုပါတော့(သေချာတာကတော့ အဖိုးက အန္တရာယ်ကြားထဲမှာနေ နေရတာပါ) အဖိုးက ဒီအိမ်လေးကနေ ဘယ်မှမသွားချင်ပါဘူးတဲ့ဒီအိမ်ဟာသူ့မိန်းမနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့နေရာလေးမို့ […]